Ubomi beHTC U11: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
Ubomi beHTC U11: Ukucaciswa kwinqanaba eliphakathi elinamandla kakhulu
I-HTC ayinalo unyaka olula kakhulu. Inkampani yaseTaiwan ilibonile icandelo layo lokunxibelelana ngomnxeba lingagqibi ukukhula. Ngaphandle kokumiliselwa kweefowuni ezigqibeleleyo kunye nezinomdla, ukuthengisa akuyeki ukuhamba. Into ebangele Oosozigidi balahlekelwa. Ngaphandle koko, bayaqhubeka nokubonisa iimodeli ezintsha. Ndiyayithanda lento Ubomi be-HTC U11.
Ku malunga kwinqanaba eliphakathi lenkampani. Ifowuni enazo zonke izithako ekufuneka zithandwe kwaye kakhulu ngabasebenzisi. Ukongeza, yifayile ye- Ifowuni enye ye-AndroidOko kukuthi, uguqulelo olumsulwa lwe-Android. Yintoni esinokuyilindela kobu Bomi beHTC U11?
Singatsho ngokuqinisekileyo ukuba yi phakathi kuluhlu lwendlela. Yifowuni enamandla eyilelwe ukukhuphisana kwintengiso. Ukunikezela ngokusebenza okuhle kubasebenzisi. Yintoni egqithisile, iza ne-Android Oreo njengomgangatho. Sikuxelela ngakumbi malunga nokubalulwa kwayo ngezantsi.
1 Iinkcukacha zeHTC U11 yoBomi
2 Ixabiso kunye nokuqaliswa kobomi beHTC U11
Iinkcukacha zeHTC U11 yoBomi
Ifowuni inayo Iscreen se-5,2-intshi yeScreen se-LCD esine-HD epheleleyo Iipikseli ezili-1.920 x 1.080. Ngaphandle koko, yakhe Ukuxinana kwepikseli nge-intshi nganye ngu 423,64. Inani elingalunganga kwisixhobo esiphakathi kwinqanaba. Ngokubanzi, isikrini sekhusi sikushiya unemvakalelo elungileyo.
Ngaphakathi sifumana Inkqubo ye-Snapdragon 630. Kuza kubakhona i iinguqulelo ezimbini ezikhoyo yale HTC U11 Life, eyahlukileyo ngokwe-RAM kunye nememori yangaphakathi. Eyokuqala yeenguqulelo ine I-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yememori yangaphakathi. Ngelixa owesibini enayo I-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yememori yangaphakathi. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha eyona ibafaneleyo. Ukongeza, inkumbulo yangaphakathi iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-2 TB ngekhadi le-MicroSD.
I-HTC ayifuni ukuphoxa kwicandelo lokufota. Zombini ezi iikhamera zangaphambili nangasemva zii-megapixels ezili-16. Ukongeza, ikhamera yangasemva inakho ukurekhoda iividiyo ezingama-4K ngesandi esikumgangatho ophezulu. Ngelixa ikhamera yangaphambili unokurekhoda iividiyo kwi-FullHD.
La Ibhetri yale HTC U11 Life inokudanisa abaninzi. Une I-2.670 mAh ibhetri, ezinokubonakala ngathi azonelanga kwifowuni yezi mpawu. Ngokumalunga nezinye iinkcukacha ezongezelelweyo, kuyimfuneko ukuqaqambisa iifayile ze- Isiqinisekiso se-IP67 ngokuchasene namanzi nothuli.
Ixabiso kunye nokuqaliswa kobomi beHTC U11
El Ixesha lokubhukisha lavulwa izolo nge-2 ka-Novemba e-UK. Akukho nto iqinisekisiweyo ngokufika kwayo kwezinye iimarike. Kwaye umhla wokufika eSpain awaziwa, enyanisweni asazi nokuba uza kuphehlelelwa na. Kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esivela kwi-HTC.
Malunga nexabiso, utshintsho luya kuba nexabiso lama-euro angama-369. Into enokudlala kakhulu ngokuchasene nayo, kuba kwifowuni ekumgangatho ophakathi (nangona ilungile kakhulu), inakho kujike kube yinto ebizayo. Ucinga ntoni ngesi sixhobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ubomi beHTC U11: Ukucaciswa kwinqanaba eliphakathi elinamandla kakhulu
I-LG iqala ukukhupha i-Android Oreo kwi-LG V30
Imicimbi yeSmartphone ngexabiso elingenakukholwa eBanggood